Sibylla | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Yitya usele » e » USibyl
Ukuba ufuna ukufumana into ngokukhawuleza, iSibylla yindawo eyaziwayo yokutya okukhawulezayo. USibylla unikezela yonke into evela kwiklasikhi yaseSweden "ephekwe ngesonka" (okt isoseji ephekiweyo enesonka) ukugqiba iimenyu ngeesoseji, iiburgers, inyama yenyama, inkukhu, i-kebabs nokunye okuninzi.
I-Aspedalsgatan 1, 577 32 IHultfred, Sverige
333 uphononongo kuGoogle
Zicocekile, zezangoku kwaye zintsha. Nangona kunjalo, ukutya kwakulibazisekile
PL SEBHODI YENKONZO YOKUPOLISA UPPSALA
Akukho sonka sisicaba kunye nesoseji kunye ne puree kwimenyu kwakhona ☹️, ayilunganga.
Ukutya okumnandi rhoqo! Abasebenzi abahle kakhulu kunye neendawo ezicocekileyo 👍👍👍
Inkonzo elungileyo kwaye kukho ipleyiti elungileyo yehamburger engenagluten.
Inkonzo embi, kuye kwafuneka ilinde ixesha elide uku-oda. Ukutya kwakulungile.